Sajilo Patro Blogs: श्रीमतीको गहना धितो राखी सेयरमा पैसा खन्याए, हेर्दाहेर्दै १० करोडको पोर्टफोलियो बनाए !
श्रीमतीको गहना धितो राखी सेयरमा पैसा खन्याए, हेर्दाहेर्दै १० करोडको पोर्टफोलियो बनाए !
सेयर बजारले कसैलाई रोडपति त कसैलाई करोडपति बनाइदिएको छ । जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड बनेको सेयर बजारले काभ्रेका एक युवालाई कसरी करोडपति बनाइदियो, आज तिनै पात्रको रोचक कथालाई हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौ । सेयर बजारवृत्तमा परिचित नाम हो, दिनेश हुमागाईँ । हुमागाईँ काभ्रे पनौती घर भई हाल कोटेश्वर सहयोगीनगरका बासिन्दा हुन् । उनी विगत २२ वर्षदेखि नेपालको पूँजीबजारमा सक्रिय लगानीकर्ता हुन् । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा पब्लिक तर्फबाट सञ्चालक समेत रहेका हुमागाईँ ‘सहयोग नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । उनले हेल्थ...
म्युचुअल फण्डमा लगानीको ७ सूत्र, नमाने डूब्नेछ पैसा
म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानीबाट बैंकहरुले दिएको बचत स्कीमकोभन्दा बढी रिटर्न(नाफा) प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पनि ७ वटा म्युचुअल फण्ड(सामूहिक लगानी कोष) छन् । पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण यस्ता कोषतर्फ तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ । तर, यो चाहि निश्चित भन्न सकिन्न कि सबै म्युचुअल फण्डहरुले सबै लगानीकर्तालाई राम्रै रिटर्न दिन्छन । कतिपय अवस्थामा यस्तो कोषमा गरिएको लगानीबाट घाटा पनि हुनसक्छ । विज्ञहरुले भनेका छन् कि यहीकारण लगानीकर्ताहरुले फण्डको बिषयमा राम्रो जानकारी हासिल गर्न आवश्यक हुन्छ । आफूले लगानी गर्ने यस्तो फण्डको बिषयमा सही जानकारी सही समयमा...
यी ९ सूत्र अपनाए सेयरले दिन्छ सुनको अण्डा !
हरेक लगानीकर्ता निकै ठूलो कमाईको आशामा सेयरमा लगानी गर्छ, तर हात लाग्छ निकै न्यून रिटर्न मात्र । इक्वीटी इनभेष्टमेन्टले घरेलु तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाको वृद्धिमा सोझै सहयोग हुन्छ, यसले स्वयम् व्यक्तिको सम्पत्ति समेत बढ्छ । त्यसो त सदियौंदेखि यो पनि प्रमाणित भएको छ कि इक्वीटी नै सम्पत्ति कमाउने एउटा सर्वोत्तम तरिका हो । तर, यसमा नसोचेको नोक्सानी समेत व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने यथार्थलाई भूल्नुुुहुुन्न । त्यसो भए आखिर कुन विधिबाट इक्वीटी मार्केटमा लगानी गर्दा चाँदीकटाई होला त ? बजारका दिग्गज विज्ञहरुलाई मान्ने हो भने ९ सामान्य तरिकालाई पछ्याउन सक्ने हो...
कुरियर छाडेर बजार छिरे, सेयरले घरगाडी र शानको जिन्दगी दियो !
धितोपत्र बजारले धेरैलाई राम्रा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । २ दशकदेखिको नेपाली सेयर बजारमा भएको सक्रियताकै कारण लोभलाग्दो उचाइँ पाएका एक भद्र र शालीन व्यक्तित्वका धनी सेयर लगानीकर्ता हुन् तुलसीराम ढकाल । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी चिलिमे हाइड्रोपावर र मध्यभोटेकोशी हाइड्रोपावरका निर्देशक समेत छन् । सफल पथ सहकारीको अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत आबद्धता जनाउँदै आएका छन् । मोरङ पथरीबाट काठमाण्डौ छिरेका उनी हाल काठमाण्डौ–५ टोखाका बासिन्दा हुन् । कुरियर व्यवसायमा होमिएका उनी केशव ज्ञवालीको...
म्युचुुअल फण्डमा लगानी गर्नुहुँदैछ ? यी ७ कुरा नमाने डूब्नेछ तपाईंको लगानी